IPad iza no tokony hovidiko? | Vaovao IPhone
Apple dia nanova ny katalaogin'ny iPad izay arosony ho an'ny mpanjifany. Ny fiverenan'ny iPad 4 hisolo ny iPad 2 efa lany andro dia mahatonga ny manapa-kevitra ny modely hividianana somary sarotra kokoa. Retina aseho sa tsia? 16Gb na capacité fotsiny? WiFi ihany sa misy fifandraisana data? Atorinay anao ireo safidy samihafa atolotry ny Apple, miaraka amin'ny sarany, ary manampy anao izahay manapa-kevitra hoe iza no maodely mifanaraka indrindra amin'izay ilainao.
1 Fampisehoana Retina 9,7-inch
2 Efijery 7,9 santimetatra
3 Raharaha amin'ny habe sy vidiny
Fampisehoana Retina 9,7-inch
Manomboka amin'ireo maodely lehibe kokoa izahay. Samy misy fampisehoana Retina fa misy fahasamihafana habe tokony horaisina na dia eo aza ny zava-misy fa samy mankafy ny haben'ny efijery mitovy sy ny vahaolana mitovy. Ny iPad Air (ankavanana) dia 0,75cm fotsiny, raha oharina amin'ny 0,94cm ho an'ny iPad Retina (na iPad 4). Ny lanjany koa dia ambany kokoa amin'ny iPad Air, miaraka amin'ny 469gr (WiFi) sy 478gr (WiFi + Data) raha ampitahaina amin'ny 652gr (WiFi) sy 662gr (WiFi + Data) an'ny iPad Retina. Ireo fahasamihafana ireo dia toa kely dia kely amin'ny taratasy, saingy miseho izany rehefa samy manana ny maodely roa eny an-tananao ianao. Ny iPad Air dia mahazo aina kokoa noho ny mahia sy noho izy maivana kokoa. Ny filalaovana azy eo am-pelatananao, ny fitetezana Internet na ny famakiana boky dia zaka kokoa amin'ny iPad Air noho ny amin'ny iPad Retina.
Mazava ho azy fa misy fahasamihafana bebe kokoa eo amin'ireo maodely roa. Ny iPad Air no maodely farany navoakan'i Apple, ary midika izany fa manana processeur A7 matanjaka kokoa izy, noho izany ny zava-bitany miaraka amin'ny iOS 7 ary miaraka amin'ireo fampiharana farany navoaka tao amin'ny App Store, indrindra ireo lalao, dia tsy mety diso. Fa ny iPad 4 no maodely teo alohan'izay, miaraka amina processeur A6x, matanjaka be koa. Misalasala aho amin'izao fotoana izao fa misy mahita app na lalao manao fahombiazana kokoa amin'ny iPad 4 noho ny iPad Air, saingy afaka fotoana fohy dia lozika fa ny iPad 4 dia manana olana sasany amin'ireo rindranasa mitaky be loatra izay handeha tsara amin'ny iPad. Air.
Ny ambin'ny famaritana dia mitovy amin'ny maodely roa. Ny fakantsary aloha sy aoriana dia mitovy amin'ny iPads roa, ny fizakan-tena ary ny fifandraisana misy ihany koa, afa-tsy ny fampifanarahana ny iPad Air miaraka amin'ny teknolojia MIMO izay manatsara ny fandraisana WiFi ary noho izany ny tahan'ny famindrana data. Raha ny tena izy dia tsy pitsopitsony izy ireo izay misy fiantraikany be loatra amin'ny fifidianana..
Efijery 7,9 santimetatra
Ankehitriny isika dia mijery ilay modely kely, ny iPad Mini. Eto ny mifanohitra amin'izay no mitranga amin'ny maodely 9,7-inch: estetika ny iPad Mini roa dia mitovy, saika tsy azo atao ny manavaka azy, ny famaritana azy roa dia samy hafa be. Raha ny maodely tany am-boalohany, ny iPad Mini taloha dia tsy manana fampisehoana Retina, ny iPad Mini Retina vaovao kosa (izany no anarany). Tsy eo amin'ny efijery ihany no misy fahasamihafana, ny processeur an'ny iPad Mini Retina no mahery indrindra A7 an'ny iPad Air, ny an'ny iPad Mini voalohany dia ny A5, ambany kokoa amin'ny fampisehoana. Ireo fahasamihafana ireo dia manan-danja kokoa noho ireo eo anelanelan'ny maodely 9,7-inch. Andao lazaina fa ny iPad Mini tany am-boalohany dia ho maodely izay hijaly tsy ho ela amin'ny fangatahana fangatahana, raha mbola manana fiainana marobe mialoha ny iPad Mini Retina.
Ny ambin'ny famaritana ny maodely roa dia mitovy ihany. Ny iPad Mini Retina vaovao somary matevina kokoa (0,75cm vs 0,72cm ho an'ny maodely voalohany), saingy saika tsy azo tanterahina. Toy izany koa no mitranga amin'ny lanjany (331gr vs. 308gr).
Raharaha amin'ny habe sy vidiny
¿Modely iza no tokony hofidiana? Ny zavatra voalohany tokony hofidiana dia ny habeny mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika indrindra. Ny haben'ny fahasamihafana dia tsy lehibe (7,9 santimetatra mifanohitra amin'ny 9,7 santimetatra) fa azo tsikaritra arakaraka ny fomba hampiasana ny iPad: ny filalaovana horonantsary na ny fitetezana pejy web dia mahafinaritra kokoa amin'ny efijery lehibe kokoa. Habe, na dia maivana kokoa aza ny iPad Mini noho ny iPad Retina, tsy dia be loatra raha ny momba ny iPad Air.
Ny fanontaniana mahazatra dia hoe ohatrinona no vola lanintsika? Handeha ho any an-tampon'ny tandavan-tany ve isika sa ho mora indrindra? Raha mitady zavatra tsy lafo ianao, nefa mieritreritra ianao fa ilaina ho anao ny 9,7 santimetatra, mety ho safidinao ny iPad Retina 16Gb, fa angamba tokony hieritreritra ny hividy ny iPad Mini Retina ianao amin'ny € 10 fanampiny, miaraka amin'ny efijery kely kely kokoa saingy misy tanjaka bebe kokoa, ary maivana kokoa sy kely kokoa. Mila mihoatra ny 16Gb ve ianao? Avy eo dia tsy maintsy ario ireo maodely mora vidy (iPad Retina sy iPad Mini tany am-boalohany) satria 16Gb ihany no misy azy ireo. Tena mila manana fifandraisana 3G ve ianao? Angamba izany vola fanampiny azonao ampiasaina amin'ny fividianana modely tsara kokoa na amin'ny fahaiza-manao bebe kokoa.
Modely iza no tianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » IPad iza no tokony hovidiko?
Manana ny iPad Air Wi-Fi 128 aho ary tsara amiko manokana, efa nanombatombana ihany koa ny iPad mini retina aho, saingy aleoko efijery lehibe kokoa hilalaovana lalao, hijerena mailaka, hijerena sns.
Sandro Medina dia hoy izy:
Manana ipad retina aho fa 64gb izay ireo no nivoaka tamin'ny tetezamita ho ipad air, ny marina dia matanjaka be ilay masinina ary tena mandaitra !!!, indrisy fa napetrak'izy ireo teny an-tsena tamin'ny 16gb fotsiny modely.!
Valiny tamin'i Sandro Medina
Hevitra momba ny fanaraha-maso lavitra mitovy amin'ny lavitra Wii ho an'ny Apple TV